Filipe Luís oo si cad u sheegay kooxda uu xiiseenayo inuu u ciyaaro Neymar Jr xili ciyaareedka soo socda – Gool FM
Filipe Luís oo si cad u sheegay kooxda uu xiiseenayo inuu u ciyaaro Neymar Jr xili ciyaareedka soo socda
Dajiye June 23, 2019
(Spain) 23 Juunyo 2019.Daafaca reer Brazil iyo kooxda Atletico Madrid ee Filipe Luís ayaa sheegay inuu xiiseenayo in Neymar Jr uu dib ugu soo laabto markale Barcelona, sababa la xiriira inuu ku dareemayo farxad.
Neymar Jr ayaa maalmihii dhawaa ee lasoo dhaafay lala xiriirinayay kooxda Barcelona, waxaana jira warar badan oo sheegaya suurtogalnimada uu dib ugu laaban karo garoonka Cump Nou inta lagu gudi jiro suuqan xagaaga.
Dhinaca kale Filipe Luís oo heshiiska uu kula jiro Atletico Madrid uu dhacayo horaanta bisha July, ayaa iska diiday inuu ka hadlo wararka xanta ah ee la xiriirinayo kooxda Barcelona, wuxuuna sheegay in mustaqbalkiisa uu go’aamin doono kaddib marka uu dhamaado Copa America 2019.
​​“Dhab ahaantii ma ogi, inaan ku biirayo kooxda Barcelona iyo inkale, waxaa jira waxyaabo badan ee ka socda halkan ilaa dhamaadka Copa America 2019”.
“Waxaan u balan qaaday tababaraha inaan wax heshiis ah la gali doonin koox ilaa iyo dhamaadka tartanka, waa inaan la fariistaa Atletico si aan u aragno fursadaha kaddib waan arki doonaa”.
Intaas kaddib Filipe Luís ayaa wax laga weydiiyay arinta ka xiriirta Neymar Jr.
“Waxba kama ogi haddii Neymar uu u dhaqaaqi doono Barcelona iyo hadii kale, sababtoo ah lama hadlin isaga, hadii ay sidaas dhacdo, waxa ay noqoneysaa dharbaaxo xoogan ee dhanka suuqa kala iibsiga ah”.
“Waxaan doonayaa inaan ku arko Neymar mar kale Barcelona, sababtoo ah wuxuu ku dareemi doonaa farxad, wuxuu ku riyaaqi doonaa wax badan, wuxuu u baahan yahay inuu dib u helo farxad iyo dhoolacadeyn”.
“Waan hubaa inuu ku faraxsanaan doono hadii uu dib ugu laabto, anigu ma ogi waxa uu isaga ku fikirayo, kaliya waxaan akhristay waxa ay saxaafada ka hadasho”.
Xulka qaranka Gabdhaha Norway oo gaaray wareega siddeeda ee Koobka Adduunka Dumarka 2019.... + SAWIRRO
RASMI: Dani Alves oo ku dhawaaqay inuu ka tagayo kooxda Paris St Germain